WARBIXIN: Sidee Bilyan Neer Lagu Noqdaa??? – somalilandtoday.com
WARBIXIN: Sidee Bilyan Neer Lagu Noqdaa???
(SLT-London)-Majaladda Forbes ee ka faaloota hodantinimada dadka adduunka ayaa todobaadkan dad badan ka yaabisay, kadib markii ay tabisay in gabadha xagga baraha bulshada caanka ku ah Kylie Jenner ay ka mid noqotay dadka bilyan-dheerka ah, ee waliba iyagu tabcaday hantida.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionJeff Bezos, ayaa kaalinta koowaad ka galay dadka bilyan-dheerka ah ee sanadka 2018-ka.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionAbigail Johnson, waxa ay madax ka tahay shirkadda maareynta maaliyadda ee Fidelity Investments, waxa ay ka tahay 250 dumarka ah ee soo galay diiwaanka Forbes.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionJack Ma waa ninka Shiinaha ugu taajirsan